छोराछोरीले बुवाबाट अपेक्षा गर्ने केही कुराहरु | Hamro Patro
छोराछोरीले बुवाबाट अपेक्षा गर्ने केही कुराहरु
बुवाको मुख हेर्ने दिन न पर्यो, आज फेसबुक लगायत अन्य बिभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा बुवाका तस्वीर अनि पितृ भावलाई असरल्ल उजागर गरिएको हुन्छ ।
विदेशमा भएकाले एक कल भएपनि बुवालाई गरौं भन्ने उत्सर्गका साथ कल गरेका पनि छन्, स्वदेशबाट विदेशमा पनि मुख हेरें है बुवा भनेर पनि फोनहरु बजेको हुनुपर्छ । फलफुल र मिठाईहरु ब्यापक बिकेका छन् अनि बुवा नहुनेहरुका आँखा पनि रसाएका छन् । संसार सबैकालागि समान छैन तर सम्झनामा कसैको पहरा पनि छैन् । सबैजनालाई बुवाको मुख हेर्ने दिवसको शुभकामना छ ।
बुवा अथवा आमाको भूमीका बालबच्चाको भविष्यकालागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ, आज बुवाको मुख हेर्ने दिन हामी पनि केही कुराहरु प्रस्तुत गर्दछौं जुन कुराहरु बुवावाट छोराछोरीले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । हात समाएर हिँडेको, ढाँडमा चढेर "गुगुती बासुती" गर्दै खेलेको अनि आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र नायकीय पुरुष नै अधिकांशकालागि जन्म दिने बुवा हुनसक्छन् ।
चाहे बुवा या आमा या छोराछोरी हुनुहन्छ, यी कुराहरु मनन गरौं र असल अभिभाकत्वको यात्रामा अनि कुशल छोराछोरीको पथमा भविष्य अघि बढाउन पाइला चालौं ।
के तपाईंका छोराछोरीलाई उनिहरु तपाईंकालागि कति महत्वपूर्ण छन् भन्ने थाहा छ ?
नेपाली परिवेशमा बुवाहरु सामान्यतया तुलनात्मक रुपमा शक्तिशाली, थोरै निरकुंश अनि छोराछोरीमा आफ्ना भावनात्मक सम्वेदना नदेखाउने खाले भनेंर चित्रण गरिन्छ । यसो गर्नाले छोराछोरीले बुवाको स्नेहको त्यो अंश महशुस गर्न पाउँदैनन जसले उनिहरुलाई आफू बुवाकोलागि महत्वपूर्ण छु भन्ने बताउँछ ।
फेरि अर्कोतर्फ पैसा र श्रोतहरुको लगानीमात्र पनि पितृ दायित्व हैन्, हरेक पिताहरुले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानी आफ्ना छोराछोरी भएको तथ्य उनिहरुका अगाडी देखाउन र बुझाउन जरुरी छ ।
के तपाईंको छोराछोरीलाई तपाईं उनिहरुलाई कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा छ ?
परपर बसेर छोराछोरीहरुलाई आज्ञा र अर्ती दिने भन्दा झ्वाम्म समातेर अङ्गालो मारेर म्वाई खाइदिनुस्, चाहे तपाईंका छोराछोरीको उमेर जति होस् ? दैनिक रुपमा आफ्ना क्रियाकलापले माया देखाउनुहोस् । नेपाली पृष्ठभूमिमा चेपारेको संज्ञा दिएर माया दर्शाउन पुरुषत्व बिपरित पनि मानिन्छ तर यो गलत हो ।
माया नदेखाएसम्म कसरी थाहा हुन्छ र ? आमा नहुँदा आफैले पकाएर खुवाउनु भएको छ ? चाहे नमिठै होस् तर माया बढ्छ । हुर्काउने काममा आमाका नियमित कामहरूमा सहयोग गर्नुहोस्ब, ससाना कुरामा पनि माया दिनुहोस् ।
तपाईंका छोराछोरीले गर्ने कामहरु तपाईंकालागि कत्ति महत्वपूर्ण छ, थाहा दिनुभएको छ उनिहरुलाई ?
छोराछोरीलाई आफुनो सोच र कार्यले सधैं बुवाआमालाई गौरव महसुस गराँउ भन्ने भावना हुन्छ । यसकारण उनिहरुको हरेक कार्यमा चाहना राख्ने अनि रुची राखेर सहयोग आदान प्रदान गर्न जरुरी छ । नेपाली पृष्ठभूमिमा छोराछोरीले केही नयाँ गरेर आएको खण्डमा त्यस्ता जाबा त हामीले आफ्ना पालाम कत्ति गर्यौं कत्ति भनेर दुरुत्साह गर्ने चलन छ । यो गलत हो, छोराछोरी बढ्दो अनुभवलाई खुल्ला दिलले सहयोग गर्ने र नराम्रा कदमहरुले आफूलाई कति चोट पूर्याँउछ त्यो नि जानकारी दिलाउने गर्न जरुरी छ ।
उनिहरुको नयाँ अनुभव र अभ्यासलाई खुल्ला दिलले स्वागत गरौं । के तपाईलाइ थाहा छ कि तपार्इ उनिहरुप्रति कति गर्व गर्नुहुन्छ ?
नेपाली समाजमा भने सदैव फलानाको छोराछोरीले यसो गर्यो भनेर तुलना गर्ने चलन छ, यो नराम्रो हो, अाफ्ना केटाकेटीलार्इ कहिल्यै अरूसङ्ग नदाँज्नुस्, तपार्इको यस्तो ब्यवहारले उनीहरूको मनोबल घट्छ ।
यसो गर्नाले छोराछोरी प्रतिको बुवाआमाको असंवेदनशीलता झल्कन्छ र मेरा बुवाआमा म प्रति गर्व गर्दैनन भन्ने भाव पैदा गर्दछ । यसो भएमा कालान्तरमा छोराछोरीमा नैराश्यता र कमजोर मनोभाव देखापर्दछ ।
पढाई या अन्य कुरामा पनि अरुसंग तुलना गर्नका साटो उनिहरुले जे गरे त्यसमा गर्व गर्दै अर्कोपटक थप राम्रो गर्न प्रोत्साहन दिने गर्नुहोस् ।
कहिलेकाँही बुवाको सानो शब्दले यति हौसला दिन्छ कि हजार वाक्यले पनि भेट्न सक्दैन । एउटा सानो चियागफ या छोटो हिँडाई अनि गफ गराईले तपाईंका छोराछोरीलाई संसारबाट लड्न सक्ने अनि जित्ने र हार सहन गर्ने उत्कट हौसला दिइरहेको हुन्छ ।
सबैजनाको जय होस् । पितृ देवो भवः